QM oo hambalyada Ciidul Adxaa u dirtay dhammaan Soomaalida - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka QM oo hambalyada Ciidul Adxaa u dirtay dhammaan Soomaalida
QM oo hambalyada Ciidul Adxaa u dirtay dhammaan Soomaalida
War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire James Swan ayaa hambalyo ku aaadan muanasabadda ciidul Adxaa u diray shacabka Soomaaliyeed.
Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay dhammaan Soomaalida u rajaynayaan “Ciid Wanaagsan.”
“Hambalyo diirran oo ku aaddan Ciidul Adxaa ayaa idin kaga imaanaysa bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya,” ayuu yiri James Swan, Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
“Waxaan dadka Soomaaliyeed kala qayb qaadanaynaa xuska maalintan iyo rajadooda ku aadan dib u heshiisiinta, naxariista, midnimada iyo nabadda. “Ciid Wanaagsan”
Previous articleDhalinyaro Soomaali Walaalo ah oo dil & dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika
Next articleMareykanka oo Soomaalida u kordhiyey mudada sharciga KMG ah